Huawei dia manolotra labo fiarovana an-tserasera any Polonina hialana amin'ny fandrarana 5G | Androidsis
Huawei dia manolotra laboratoara amin'ny fiarovana an-tserasera any Polonina hialana amin'ny fandraràna 5G
El Governemanta amerikana dia manery mafy ny firenena manerantany handà ny fitaovana 5G an'ny Huawei. Izany fepetra izany dia efa nahita firenena sasany Aostralia, Nouvelle Zélande ary Japana sakano ny mpanamboatra fitaovana fifandraisan-davitra lehibe indrindra manerantany amin'ny drafitra 5G-ny.
Na dia tsy nisy porofo mivaingana aza fa nomen'i Huawei na hanome ny governemanta Shinoa angona ho an'ny mpampiasa, nitombo ny olan'ny orinasa tany Polonina vao tsy ela akory izay rehefa nosamborina ny talen'ny varotra Huawei niaraka tamin'ny mpiasa poloney iray an'ny orinasam-pifandraisan-davitra Orange ho mpitsikilo. Ny orinasa dia maniry ny hametraka fitokisana any amin'ny faritra hamadika izany. Lazainay aminao ny fomba!
Izany fiampangana izany dia nahatonga ny governemanta Poloney hieritreritra ny fandrarana ny Huawei tsy hanome fitaovana 5G ao amin'ny firenena. Saingy amin'ny fiezahana hisoroka an'io, Huawei dia nanolo-kevitra ny hanokatra toeram-pisedrana fiarovana any Polonina, raha eken'ny tompon'andraikitra izany. Ity orinasa ity dia nanao io tolotra io nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Alarobia. (Mifandraisa: Donald Trump dia te-hanakana ny varotra rehetra an'ny ZTE sy Huawei any Etazonia)
Raha ny filazan'ny lehiben'ny Huawei Poland, Tonny Bao, ny orinasa sinoa dia vonona ny hanangana ivon-toerana fiarovana cyber eto Polonina raha eken'ny tompon'andraikitra ho vahaolana azo itokisana izany. Nisy mpanatanteraka hafa koa nanampy izany ny governemanta poloney dia tsy nanana antony hanakanana ny Huawei amin'ny fanaparitahana 5G.
Huawei dia nampiasa an'io modely fiarovana io any amin'ny firenena sasany hanamafisana ny maha-azo itokisana azy ary nahomby izy io. Tamin'ny taon-dasa, nanokatra iray ny orinasa tany Bonn, Alemana, ary ny laboratoara dia hatsangana amin'ny volana ho avy amin'ny fotoana henonao momba ny fanaovana politika amin'ny sehatra EU - izany hoe any Bruxelles, Belzika.
Toy izany ny fampitaovana afaka miditra sy mizaha toetra ny fitaovan'ny Huawei ireo mpiasan'ny tamba-jotra telecom. Ho fanampin'izany, Huawei dia manana fotodrafitrasa any UK antsoina hoe Huawei Cyber ​​Security Assessment Center (HCSEC) ary natsangana sivy taona lasa izay. Ireo fotodrafitrasa any UK dia miasa amin'ny sehatra hafa, manome ny mpiasa an-tsaina anglisy, izay mandrafitra ny mpiasa sasany ao, ny fotoana hijerena ny fitaovan'ny Huawei.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia manolotra laboratoara amin'ny fiarovana an-tserasera any Polonina hialana amin'ny fandraràna 5G